Thursday, 06 June 2019 13:47
ထိုင်းရေနံကုမ္ပဏီ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဆောက်မည်
ထိုင်းအစိုးရပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီ PTTEP က မြန်မာနိုင်ငံတွင် မဂ္ဂါဝပ် ၆၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
ဘယ်သူတွေ စက်မှုဇုန်မြေ အသုံးချခွင့်ရရှိလာမလဲ???
စက်မှုဇုန်မြေကွက်တွေ ရယူထား ပြီး လုပ်ငန်းမလုပ်ကိုင်တဲ့အကွက်တွေ ကို မြေတန်ဖိုးရဲ့တစ်ဝက်နဲ့ ပြန်လည်သိမ်းယူ မယ့်အပြင် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်အထိ ချမှတ်မယ်လို့ စက်မှုဇုန်ဥပဒေကြမ်း မှာ ထည့်သွင်း ရေးဆွဲထားပါတယ်။ တောင်ဒဂုံစက်မှု ဇုန်မှာရှိတဲ့ Smart
ဘာတွေ အဆင့်မြှင့်ရန် ပြင်သစ်ထံမှ ယူရို၃၅သန်းကျော်ချေးတာလဲ???
အစိုးရသည် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီး ငါးရုံကို အလုံးစုံပြုပြင်ခြင်း/အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများ ဆောင်ရွ က်ရန် ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ(AFD)ထံမှ ယူရို၃၅ဒသမ၇သန်းချေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ သဝဏ်လွှာပေးပို့ထားသည်။
ထပ်မံဖောက်လုပ်မည့် ကျိန်းတောင်စေတီ တောင်တက်လမ်းသစ်
ဘုရားဖူးများ အဆင်ပြေစေရန် မင်းပြားမြို့ရှိ သမိုင်းဝင် ကျိန်းတောင်စေတီ တောင်တက် လမ်းအသစ်တစ်ခုကို ဘုရားစောင်းတန်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ဖောက်လုပ်နေပါသည်။
မလေးရှားအခြေစိုက် ပရိဘောဂကုမ္ပဏီစက်ရုံကို ပဲခူး၌ တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်နေ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မလေးရှား နိုင်ငံ အခြေစိုက်ပရိဘောဂကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ မန်ဂျန်ရှားပရိဘောဂစက်ရုံတည်ဆောက်ကာ တစ်နှစ်လျှင် မန်ဂျန်ရှားသစ်တန်ချိန် ၃၀ဝ၀ ခန့် ဝယ်ယူ ရန် စီစဉ်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မန်ဂျန်ရှား စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်း (ယာယီ)မှ သိရသည်။
Monday, 24 December 2018 10:23
နေ့စဉ် ကြံတန်ချိန်တစ် သောင်းနှစ်ထောင်ကြိတ်နိုင်မည့် သကြားစက်ရုံကို ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့တွင် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိ မြေဧက ၁၆ဝဝ အကျယ်အဝန်းတွင် ထန်းတပင်စက်မှုဇုန်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ကျောက်တံတားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ သိရသည်။
Monday, 17 December 2018 12:26
လာမည့်နှစ်တွင်သီလဝါဆိပ်ကမ်း စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု JICAထုတ်ပြန်
ကန်ဒေါ်လာသန်း ၂ဝဝ တန် သီလဝါဆိပ်ကမ်းကို ၂ဝ၁၉ နှစ်စတွင် စတင်သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ် ပြီး ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ်ရှိ ကြောင်း ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေ ဂျင်စီ (JICA) က ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည်။
Friday, 14 December 2018 10:19
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Osotspa အများ ပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံအခြေစိုက်လွယ်ဟိန်းကုမ္ပ ဏီလီမိတက်တို့သည် သီလဝါအ ထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် အချိုရည် စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် ကန်ဒေါ် လာ ၇၃ သန်းကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မည်ဟု ကြေညာသည်။